Tuesday October 12, 2021 - 17:43:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Garsoorayaasha Maxkamadda ICJ ee fadhigeedu yahay dalka Holland ayaa go'aan kama dambays ah ka gaartay kiiskii dacwadda badda ee udhaxeeyay Kenya iyo Soomaaliya.
ICJ ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay dacwadda Kenya ee ku doodaysay in iyadu ay leedahay xariijinta xuduudda dhanka biyaha ah ee labada dal udhaxaysa, maxkamada ayaa sheegtay in aysan jirin wax heshiis xuduud badeed ah oo labada dal ay horay ukala saxiixdeen.
Sida ku cad khariirad cusub oo soo baxday ICJ ayaa sameysay xariiqin badeed udhaxayn doona Kenya iyo Soomaaliya arrinkaas oo qudhiisu ah xadgudub hor leh oo laga galay biyaha Soomaaliya.
Dowladda Kenya iyo dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa horay ugu murunsanaa dhul badeed cabirkiisu yahay 100,000KM isku weer ah, dowladda Kenya ayaa horay usheegtay in aysan u hoggaansami doonin go'aanka kasoo baxa maxkamaddan fadhigeedu yahay dalka Holland.
Waxaa xusid mudan in dowladda Kenya ay xoog ku haysato dhulal ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed sida NFD iyo magaalooyin katirsan gobollada Gedo iyo Jubbada hoose mana jirto cid ku haysato dhulkaas oo aan ka aheyn Shabaabul Mujaahidiin
Cali Sayid Fiqi oo Yiri: Diinta Islaamka Waxba u Tari meyso Dadka Soomaaliyeed. [DAAWO]
Maamulka 'Somaliland' oo dad Shacab ah kasoo barakiciyay magaalada Ceerigaabo.
Wasiirka arrimaha dibadda Pakistan oo booqasho ku tagay dalka Afghanistan.
15 Askari Kenyaan ah oo ku dhintay qaraxyo markale ka dhacay gobolka Lamu.
Colin Powell Wasiirkii arriimaha dibadda Mareykanka oo Covid19 udhintay.
Melleteriga Kenya oo xaqiijiyay qaraxii khasaaraha dhaliyay ee ka dhacay gobolka Lamu.
14 Askari Kenyaan ah oo ku dhintay qarax ka dhacay gobolka Lamu.